China eqingqiweyo Yobisi yenkomo Ulwimi mveliso kunye nabenzi | Huikang
Ukutya okubandayo kwahlulwe kwaba kukutya okubandayo kunye nokutya okungumkhenkce. Ukutya okukhenkciweyo kulula ukukugcina kwaye kusetyenziswa kakhulu kwimveliso, ukuhanjiswa kunye nokugcinwa kokutya okonakalayo njengenyama, iinkukhu, iimveliso zasemanzini, ubisi, amaqanda, imifuno kunye neziqhamo; isondlo, ifanelekile, isempilweni kwaye iyonga; Imfuno yentengiso inkulu, ihlala kwindawo ebalulekileyo kumazwe aphuhlileyo, kwaye ikhula ngokukhawuleza kumazwe asaphuhlayo.
Ukutya okubandayo: akufuneki kubandiswe, kukutya apho iqondo lobushushu lokutya lincitshisiwe ukusondela kwindawo ebandayo kwaye ligcinwe kobu bushushu.
Ukutya okutyiweyo: Kukutya okugcinwe kubushushu obungaphantsi kweqondo lokubanda emva kokuba kungumkhenkce.
Ukutya okupholileyo kunye nokutya okubandayo kubizwa ngokuba kukutya okungumkhenkce, okunokwahlulwa kube ziindidi ezintlanu: iziqhamo kunye nemifuno, iimveliso zasemanzini, inyama, iinkukhu kunye namaqanda, irayisi kunye neemveliso zewoodle, kunye nokutya okulungiselelwe ngokuhambelana nezinto ezingasetyenziswanga kunye neepateni zokusetyenziswa.
UFrancis Bacon, umbhali nesithandi sobulumko sase-Bhritane senkulungwane ye-17, wazama ukufaka ikhephu kwinkukhu ukuze iqine. Engalindelanga, wabanjwa yingqele yaye wakhawuleza wagula. Kwanangaphambi kokuba kwenziwe ulingo olubi ngebhekoni, abantu babesazi ukuba ingqele egqumayo inokuthintela ukutya inyama "ekubi". Oku kubangele abanini-mhlaba abazizityebi ukuba babeke ii-ice cellars ngendlela yabo enokugcina ukutya.
Akukho nanye kula malinge okuqala okutya okubandayo afumene isitshixo sengxaki. Ayisiyiyo kangako iqondo lokumisa, njengoko sisantya sokumisa, eso sisitshixo sokuqanda inyama. Mhlawumbi umntu wokuqala ukuqonda oku yayingumqambi waseMelika uClarence Birdseye.
Kwakungekho ngeye-1950s kunye nee-1960s, xa iifriji zasekhaya zaye zathandwa ngakumbi, apho ukutya okubandayo kwaqala ukuthengiswa ngobuninzi. Kungekudala emva koko, ukupakishwa okubomvu, okumhlophe, kunye neblue kweBoz Aiyi kwabakho ezivenkileni kwiindawo ezininzi zehlabathi kwaye kwaba yinto eqhelekileyo.
Kwiminyaka embalwa emva kweMfazwe Yehlabathi I, uBozee wenza ubalo lwabantu lwezityalo zasendle ngelixa wayehamba kwiLabrador Peninsula eCanada. Waqaphela ukuba imozulu ibanda kangangokuba iintlanzi zagodola ngamandla emva kokuba ebambe intlanzi. Wayefuna ukwazi ukuba esi sisitshixo sokugcina ukutya.
Ngokungafaniyo neBacon, uBirdseye wayehlala kwisikhenkcezisi. Emva kokubuyela ekhaya ngo-1923, wazama nefriji ekhitshini lakhe. Emva koko, uBoz Aiyi wazama ukukhenkcela iintlobo ezahlukeneyo zenyama kwisityalo esikhulu sokukhenkcisa. Ekugqibeleni uBirdseye wafumanisa ukuba eyona ndlela ikhawulezayo yokubamba ukutya kukucinezela inyama phakathi kwamacwecwe esinyithi aqanduselweyo. Ngama-1930s, wayekulungele ukuqala ukuthengisa ukutya okuneqhwa okuveliswe kumzi mveliso wakhe waseSpanish, eMassachusetts.
Ku-Boz Aiyi, ukutya okubandayo kwangoko kwaba lishishini elikhulu, kwaye nangaphambi kokuba ayile inkqubo yokuqandusela kabini, inkampani yakhe yayineetoni ezingama-500 zeziqhamo nemifuno ngonyaka.
Ukwaziswa kwemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Zenziwe ikakhulu e-China.
Ukucaciswa kwemveliso Slice kunye nedayisi, nxiba umtya
Iimpawu Product Inomdla okhethekileyo wolwimi lwenkomo
Sebenzisa ijelo Ukutya, iivenkile ezilula, iintsapho Sebenzisa le ndlela: Qhotsa kunye negrill.
Ulwimi lwenkomo lunokucocwa, losiwe, okanye luhanjiswe ngolwandle. Iilwimi ezithengiswa kwezinye iimarike zikulungele ukutyiwa, kodwa iilwimi eziluhlaza, ezitshayiweyo okanye ezinetyiwa eninzi zihlala zifumaneka. Emva kokupheka, kulungile nokuba kuyaphakwa kushushu okanye kuyabanda, kunye okanye ngaphandle kwesinongo. Iilwimi ezinetyiwa zihlala ziphekwe kwaye zisikiwe ngejusi emxinwa. Zihlala zinikwa ingqele. Iilwimi ezingaxutywanga zinokubiliswa ngewayini okanye zibiliswe kwaye zinikezelwe ngezinto ezahlukeneyo. Ulwimi lwenkomo kunye nolwimi lwe-veal lolona luqhelekileyo, njengolwimi lwenkomo kwisosi.
Egqithileyo Iingceba zeengulube ezibilisiweyo
Okulandelayo: Frozen Diced Sika iminqathe
I-Beef Tendon Skewers ezikhawulezayo